NOOCYADA LINDEN: SHARAXAAD IYO SAWIR - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada lime iyo muuqaalkooda
Maalinta kulul, oo kulul, waxay ku fiicantahay in lagu raaxaysto haraaga qoryaha qubeyska hore, geedo waxtar leh oo qurux badan oo leh hanti qiimo leh iyo tayada. Miyaan marar badan ku fekereynaa sida geedka sida linden?
Wuxuu meel walba ku koraa, waana ogyahay indhaha dadka deggan magaalada iyo dadka deggan magaalada - geedo caan ah oo aan caadi ahayn, qayb ka mid ah dabeecadda. Dad tiro yar ayaa hadda og in dhaqanka qadiimiga ah ee Yurub ay calaamad u tahay dumarka: suxuunta, shanlooyinka, kabaha iyo waxyaabo kale oo badan oo guriga ka mid ah ayaa laga sameeyey alwaax.
Astaamaha geedaha liidka
Geedka liniin waa mid qurux badan oo leh siyaabo badan oo geedo faa'iido leh, oo dhererkiisu gaaro 40 mitir kiisaska qaarkood, oo tixraacaya geedaha gaajeysan. Caleemaha waa bedel, qaabeeya sida wadnaha, xabo, asmmetrical ee cidhifyada, tilmaamaya apically.
Ma taqaanaa? Way adagtahay in la yiraahdo inta sano ee linden sii kordhaya, maxaa yeelay waxay u dhiman kartaa da 'kasta. Si kastaba ha noqotee, waxaa loo tixgeliyaa in geedka uu leeyahay dhererka, mudada noolaanshaha caadiga ah waxay noqon kartaa 400 ama 600 sano. Xitaa waxaa jira warar ku saabsan geedaha shakhsiga ah ee ka weyn kun sano
Dhexdhexaadiyaha taajku wuxuu noqon karaa ilaa 5 mitir, taajkii laftiisa waa cufan, siinaya dabo qurux badan, oo si fiican u la qabsan karo qashinka.
Ubaxa wuxuu leeyahay caraf udgoon iyo guryo qiimo leh oo qiimo leh. Bishii Luulyo, markii uu ubaxu dhaco, buzz ayaa si joogta ah loo maqlaa meel u dhow - shinni malab. Malabka lime waxaa loo arkaa mid ka mid ah noocyada ugu qiimaha badan ee malab. Miraha waa nuts yar oo leh hal shinni gudaha ah.
Nidaamka asaasiga ahi waa mid aad u awood badan, oo u dhexgalaya qoto dheer. Geedaha waxaa loo tixgeliyaa caddaadiska cayayaanka iyo cudurrada, waxay u habboon yihiin xaaladaha deegaanka, noocyada badan ayaa u dulqaadanaya inay hoos u dhigto.
Sifooyinka la tilmaamay ayaa u oggolaanaya isticmaalka beeraha loo abuuray ujeedooyin madaxeed.
Sidoo kale malab bakeing, rapeseed, acacia, phacelia, miro, malab landos waa mid aad u faa'iido leh.
Xagee ayuu ku koraancarrada waxay hagaajineysaa halkaa: caleemaheeda ayaa si kedis ah u kalloobi kara, sidaas awgeed waxay soo noqotaa tiro badan oo ka mid ah xubno qiimo leh oo ku jira ciidda.
American linden (madow) (Tilia americana)
Waxay ku nooshahay bariga waqooyiga Ameerika, waxay leedahay jilif midab madow ah, taas oo loogu magac daray magaca labaad. Dhererka wuxuu noqon karaa ilaa 40 mitir. Krone wuxuu leeyahay qaab ka mid ah ovalaha ballaaran, dhexroorka taajka ayaa gaaray 22 mitir. Caleemaha waa caleen, cagaar ama bunni. Caleemaha waxay leeyihiin muuqaal ah ovalaha ballaaran, mararka qaarkood waxay gaareen 20 cm ballaaran.
Ugu sarreysiisaa ubaxu wuxuu ku dhacaa bartamihii July, ubaxyada 8-15 foomka inflorescences, miraha waa wareegyo wareegsan oo aan lahayn feeraha, illaa 1 cm dhexroor.
Geedku waa mid aan qabin carrada iyo iftiinka, si degan lehna u khuseeyso baraf, iyo abaar, iyo dabaysha. Horumarin in aan degdeg ah, waayo sanadka ku darayaa height ah 60 cm.
American linden waa xal wanaagsan oo loogu talagalay goobaha iyo beeraha, iyo sidoo kale beeritaanka kali ah.
Qaababka qaababka line ee qurxinta:
geed canab ah oo koraya;
Wadanka noocyada noocaan ah waa Bariga Fog. Wuxuu jecelyahay buuraha buuraha iyo dooxooyinka webiyada. Dhererka 25-30 mitir, dhexroorka mitirku wuxuu gaadhaa mitir. Jirka ayaa leh midab guduudan oo midabkiisu yahay casaan, oo ah tufaax qurux badan. Caleemaha qoryaha.
Dhererka ka mid ah caleemaha oval-qaabeeya waa 7 cm, guga waxay leeyihiin midab cagaaran cagaaran iyo xirmooyinka casaan dhalaalaya, xagaaga ee midabka cagaarka madow, ee dayrta caleemo noqdaan iftiin huruud ah.
Waxuu u dhowyahay bilowgii bilawgii August, iyadoo ku xiran heerkulka, waqtiga ubaxu wuu kala duwanaan karaa. Inflorescences waxay ka kooban tahay 5 ilaa 15 oo ubax ah. Miraha waa mid sare, siman, yar yar oo loo yaqaan pubescent.
Waxay u adkaysaa hooska, barafka, dabayl, jecel carrada qoyan. Tayada tayada leh ee Amur linden:
warshad malab badan;
Seddexda koobaad ee qarniga ah waa mid gaabis ah, ka dibna wuxuu dedejinayaa. Haddii kale, waa (sida ku cad sharaxaadda iyo astaamaha nafleyda) waxay u eg yihiin liniin yar. Celcelis ahaan, wuxuu ku nool yahay 300 sano.
Noocyadaas waxaa ilaaliya dawlad goboleed waxayna mamnuucday warshadaha warshadaha ee gobolka Amur, Khabarovsk iyo gobolka Perm.
Qalafsanaan (lacag) (Tilia tomentosa)
Meelaha koritaanka noocyada noocaas ah - Asia Minor, Ukraine, Balkans, Galbeedka Yurub. Sidoo kale waxay u keentay dalalka Baltic iyo gobolka Crimean-Caucasus. Wuxuu jecel yahay in uu la midoobo ash, geedkii, xayawaanka.
In height dherer ilaa 30 mitir. Tajirkeeda foomka saxda ah, gudaheeda, dambe - oval. Foostadu waxay leedahay qaab cylindrical joogto ah. Jilifku waa guduud mugdi ah, si siman u taabasho, dildilaaca ayaa soo baxaya, caleemaha waa la ogaado, kadibna pubescence ayaa baaba'aya.
Caleemaha waa oval, tilmaamaya dusha sare, 7-8 cm dheer oo ifaya xilliga dayrta, ayan ka tegin geedka waqti dheer.
Ma taqaanaa? Waxay magaceeda ku heshay caleemo: mugdi, cagaar dusheeda, waxoogaa yar oo qaloocsan marka ugu horeysa, ayaa dareemay hoosta. Xilliga qorraxda, geesahoodu waa leexan yihiin oo furan dhinaca hoose.
Dhirta toban maalmood ayaa dhacda qeybta labaad ee bisha Luulyo. Ubaxyo midab leh oo casaan leh ayaa lagu soo ururiyaa nus-dalladaha. Nuts gaaban oo dhaadheer ayaa gaara dhererka 1 cm.
Waxa uu jecel yahay iftiinka, hooska ayaa sidoo kale si fudud u dulqaadan kara, iyo sidoo kale abaarta. Wuxuu jecel yahay qalalan, ciid cusub, koritaanka gaaban. Nolol maalmeedka noocan ah waa ilaa 200 sano.
Waa muhiim! Marka dhaxantu timaado, dhirta yaryar ee sii kordheysa ee magaalooyinka waa in la daboolaa si looga fogaado aaladda.
Geedka waxay leedahay qiimo madaxtooyada ah, gaar ahaan xilliga ubaxyada, waxaa wanaagsan in dhirta la beero, lahaansho gaar ah, alleys.
Noocyada ornamental ee liniinka dareemay laba: "Varsaviensis" iyo "Brabant".
Lilyada Yurub (Tilia europaea)
Noocyadaasi waxay magaceeda ka heshay meesha koritaanka: waxay ku nooshahay dhulka Western Europe. Wuxuu koraa 40 mitir. Taajigeedu waa dherer, teendhaduna waa sida. Jidhka dhexroorku wuxuu noqon karaa ilaa shan mitir, jilifku waa mid cirro leh, daboolaya dildilaaca.
Caleemaha waa oval, wadnaha-qaabeeya, sare ee caleen waa cagaar mugdi ah, hooskuna waa caddaan caddaan ah.
Ma taqaanaa? Mid ka mid ah noocyada geedka yurubiyanka ah ee Yurub - 'Wratislaviensis', waxay soo saartaa caleemo huruud ah oo dahab ah, taas oo marka danbe noqota cagaaran, sidaas darteed caleemaha yaryar waxay abuuraan aal dahab ah agagaarka taajka.
Waxay ku jirtaa Juun ilaa laba toddobaad. Fareebka nuts, miraha waxay u bislaadaan bisha Agoosto.
Ciriiri adkaada jiilaalka. Waayeelku waa 150 sanadood, inkasta oo dadka mudada dheer laga helayo ku dhowaad toban jeer ka weyn wakhtigaan.
Noocyada qurxinta ee Linden Yurub: kala qaybsanaan iyo geedka canabka ah.
Cawadiga Cawadiga (Tilia caucasica)
Noocyada caanka ah ee inta badan caan ku ah Cafiska iyo jasiiradaha Crimean, ayaa laga helaa Aasiyada Yar. Xaaladaha qaarkood, geedku wuxuu gaaraa 40 mitir oo dherer ah, jirku wuxuu leeyahay dhexroor 2 mitir. Crohn wareegsan ama ukunta-qaabeeya. Boorashka dhalinyaradu waxay leeyihiin midab guduudan.
Caleemaha waa weyn, illaa 15 cm, qaybta sare ee caleen waxay leedahay midabka cagaarka madow, qaybta hoose waa cawl, geesaha xididdada waxaa ku jira rucubyo timo.
Waqtiga ubaxu wuxuu noqon karaa dhammaadka Juun ama badhtamaha July. Ubaxyada waa huruud, badanaan, kareysa, foorescences qashin ah.
Geed u diyaarsanaanta geedka kuleylka ah ee kuleylka ah, oo doorbidaya, si kastaba ha ahaatee, ciidda qoyan ee qoyan; Linden Kawaanka ayaa si dhaqsi ah u koraaya marka loo eego yar-yar, oo wuxuu ku nool yahay ilaa 300 sano.
Geedku wuxuu leeyahay qiimo qurxoon, oo loo isticmaalo beerta beerta.
Noocyada ornamental: cagaar iyo madow.
Noocyada waxay ku badan tahay kaymaha adkaa ee Crimea, oo ah dhexdhexaad dabiici ah oo ka mid ah Cawadsiinta iyo qulqulka yar yar.
Dhererka geedku waa ilaa 20 mitir. Doolarka waa oval, cufan. Lafaatiirta lakulmay.
Caleemaha waa 12-centimitir, oval, cagaar mugdi ah oo ka baxsan dibedda oo ka soo jiidan gudaha, ee geesaha silsiladaha xididdada timaha madow.
Time ubax - bilowga Juun, muddada - laba toddobaad. Ubaxa wuxuu leeyahay 3-7 gogo 'inflorescence.
Geed yar ayaa si tartiib ah u koraa, madaama ay koreyso, koboc dhaqaale.
Waxay u adkaysata dhaxan iyo abaar, si fudud u dulqaadanayaa hooska.
Linden oo dharbaaxeysan - (Tilia platyphyllos Scop.)
Waxaa lagu qaybiyay kaymaha Yurub, Ukraine, Moldova, Caucasus. Heerkulka jirridda ilaa 35 mitir, wuxuu gaaraa dhexroor dhan 6 mitir. Taajirku wuu faafaa, wuxuu leeyahay qaabka haramka ballaaran. Caleemaha Young waa brownish-cas, baroore, dhalinyarada - qaawan.
Oval 14-centimeter wuxuu ka baxaa dhirbaaxo, cagaar mugdi ah oo dibedda ah, iftiinka gudaha, ee geesaha timaha.
Ubaxku wuxuu dhacaa bisha Luulyo, ubaxu waa jaale ama kareem, laga bilaabo 2 ilaa 5 gogo 'inflorescence. Midhaha ku jira foomka of a turjumaad, wareega, cirifka.
Geedku si dhakhso ah ayuu u koraa, ciidku wuxuu jecel yahay bacrin ah. Si caadi ah u adkaysta dhaxan, gaas.
Marka aad sameysid qaabka muuqaalka, waxaad ku beeran kartaa ash, acacia, qoryo, khariidado, geed kedar ah, geedo iyo geedo dhir ah oo geed u dhow.
Ciriiri ku noolaanshaha cimriga: waxay ku noolaan kartaa da'da 500, dadka qaarkood waxay ku nool yihiin in ka badan kun sano.
Noocyada qurxinta ee Linden oo ballaaran ah: dahab, geedka canabka-sii kordhaya, gudaheeda, oo la faaruqiyay-leaved.
Waxay ku koraan gobollada koonfurta ee Bariga Fog. Geedku wuxuu koraa 20 mitir. Badanaa badiyaa, badi waa madow, dildilaacyo.
Taajashadiisa wuxuu leeyahay qaabka gogosha ballaaran. Waxay leedahay mid aad u ballaaran, ilaa 30 cm, ka baxo pubescent ka soo underside.
Waxaa la Bloomaa ee July, bloom soconayaa ilaa saddex toddobaad. Ubax 1-1.5 cm dhexroorka, inflorescences xoog leh, 8-12 ubax, drooping.
Ma taqaanaa? Waad ku mahadsan tahay nooca inflorescences, nectar lama dhaqo inta lagu jiro roobka, iyo shinni waxay qaban karaan shaqadooda xitaa cimilada roobka.
Nusqada qoyan ee loo yaqaan 'nutsescent' oo leh dhexdhexaad ah oo ah 1 cm bislaado bisha Agoosto.
Geedka aad u qurux badan oo leh diirran baraf sare.
Liin yar yar (wadnaha-qaabeeya) (Tilia cordata Mill)
Waxay ku koraan gobolka Crimean-Caucasus, qaybta Yurub ee Ruushka, iyo sidoo kale Siberia, iyo Galbeedka Yurub. Magaca kale - Wadnaha Linden - wuxuu helay qaabka caleemaha.
Waxay gaadhaysaa ilaa 30 mitir oo dherer ah, jirku wuxuu ka badan yahay mitir dhexdhexaad ah, qaabka cylindrical. Jilibka yaryar waa cawl, mid caadi ah, madow qadiimka ah, ayaa noqda mid adag.
Dhexdhexaad ee taajkii 10-15 mitir.
Ma taqaanaa? Xayawaanka yar-yar waxay leeyihiin dhismo xiiso leh: laanaha sare waxay koraan, kuwa dhexe waxay udhowaan jihada wareegsan, kuwa hoose waxay hoos ugu dhigaan dhulka.
Caleemuhu waa yar yihiin (3-6 cm), wadnaha-qaabeeya, qaybta sare waa cagaar, dhalaalaya, hoose - cawl.
Waxay ku dhacdaa laba toddobaad dabayaaqadii Juun ama bilaha Luulyo. Ubaxku waa mid yar, jaalaha ah-cadaan, wax walba oo ka kooban 5 ilaa 7 gogo '. Miraha, nuts wareega wareega ah, bislaadaan bisha Agoosto.
Si kastaba ha noqotee geedo qabow iyo abaarta u adkaysta, waxay jecel yihiin ciidda iftiinka cagaaran, si kastaba ha ahaatee, waxay hagaajineysaa.
Waxay si tartiib ah u koraan marka hore, 30 cm sannadkii. Waxaa loo adeegsadaa in lagu beero xayndaabyada, beeraha, wanaagsan ee beeritaanka halbeegga ah iyo daaqada.
Waayeelku waa in ka badan 500 sano.
Liinbooyinka yar yar iyo liniin-leawed waxay leeyihiin wax badan oo ka mid ah astaamaha bayoolajiga, si kastaba ha ahaatee waxaa jira kala duwanaan kala duwan:
caleemaha caleenta yaryar ee caleenta ah laba toddobaad ka hor;
caleen caleen yar laba toddobaad kadib;
ubaxyo waaweyn oo dhadhan badan ayaa ka weyn, laakiin yar yar ee inflorescence;
yar-yareeye oo ka yar dalbashada bacriminta ciidda iyo tayada;
Caleemaha waaweyn waxay u dulqaadanayaan abaaro ka sii wanaagsan;
Krupnolistnaya waxay ku haboon tahay deegaannada magaalooyinka.
Noocaankan waa midabka dabiiciga ah ee qorraxda yaryar iyo kuwa aan dhicin. Marka loo eego astaamaha, waxay u egtahay midka koowaad, laakiin waxa uu leeyahay kala duwanaansho:
Blooms laba toddobaad ka hor inta aan la yiraahdo linden yar;
si dhakhso ah u koraa;
aad u adkaysta dhaxan;
xaalado wanaagsan oo ka jira magaalada;
caleemaha waa weyn, taajku waa ballaaran yahay.
Waxay ku koraan dhulka reer Galbeedka Siberia, waxay jecel yihiin kali ah, laakiin mararka qaarkood waxay sameeyaan "jasiiradaha lime" ee kaymaha, sharaxaadda taas oo sheegaysa joogitaanka firirka iyo aspen. Kobaca wuxuu gaari karaa 30 mitir, dhexdhexaad ah 2 - 5 mitir. Jilibka yaryar waa buni, oo leh miisaan, midda hore waa mugdi, oo leh dildilaacyo.
Caleemuhu waa yar yihiin, illaa 5 cm oo dheer, wareegsan, dusha sare waa cagaar, hoose waa iftiin, timaha.
Ubaxku wuxuu qaataa laba toddobaad dhammaadka bisha Luulyo. Ubaxku waa caddaan yahay qorraxda, waxay ka kooban tahay ugxan firfircoon. Miraha - lowska la jeexay, oo leh laga bilaabo 1 illaa 3 abuur, ripens September.
Wuxuu jecel yahay carrada qoyan sod-podzolic leh lime iyo iftiin, u dulqaadashada hooskii. Gabi ahaanba lama socon karo dhulalka qoyan. Xaaladaha magaalada waxay aqbalaan si wanaagsan.
Waxay si tartiib ah u koreysaa, waxay tilmaamaysaa muddada dheer: waxay ku noolaan kartaa kun sano.
Wuxuu ku koraa xuduudaha Bariga Aasiya, oo ah xayawaan jilicsan. Dhererka geedku wuxuu ilaa 20 mitir u yahay, jilifaha yar yar waa siman, brown, jir ah oo ku jira grooves, madow. Krone waa mid aad u sarreeya, wuxuu leeyahay qaabka oval, iswada.
Caleemaha waa yar yihiin, 5-7 cm, oval, inta badan caanno, cagaaran dibedda, cawl-guduud leh gudaha xididdada xididada xididdada.
Ubaxku wuxuu dhacaa July ama August ilaa laba toddobaad. Ubaxku waa yar yahay (1 cm), waxaa laga soo ururiyay tiro badan oo ah foorishooyin.
Miraha - naasaha wareegsan ee wareegsan ah - u bislaadaan Sebtembar.
Linden Japanese ayaa si tartiib ah u koraan. Waxay leedahay caabbi baradho leh, waa nooc gaar ah oo warshadda malab ah. Shaaha ay ku jirto caleemaha linden ee Japan waa mid aad u qiimo badan.
Waa wax aan suurtagal ahayn in wax waliba lagu daro qaab qoraal ah oo ay tahay inaad u sheegto linden - geedka cajiibka ah oo aad u fiican, macnaheedu waa qaybo ka mid ah dhammaanba dadka. Waxaa jira in ka badan 40 nooc oo ah. Noocyada dhaqanka, noocyada kuwaas oo lagu sharraxay qodobkan, ayaa loo xushay waxaana loo isticmaalaa ujeedooyin kala duwan oo laga beerto magaalooyinka iyo beeraha gaarka loo leeyahay.